မနက်တိုင်းလှဖို့အတွက်သုံးမိနစ်ပဲစောင့် ဆိုတဲ့ Etude House ရဲ့ 3-Minutes Care Series | CosmeticMyanmar
Home » Article » မနက်တိုင်းလှဖို့အတွက်သုံးမိနစ်ပဲစောင့် ဆိုတဲ့ Etude House ရဲ့ 3-Minutes Care Series
မနက်တိုင်းလှဖို့အတွက်သုံးမိနစ်ပဲစောင့် ဆိုတဲ့ Etude House ရဲ့ 3-Minutes Care Series
တစ်နေ့တစ်နေ့ အလုပ်တွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ အိမ်အလုပ်တွေကများလွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လှဖို့တောင် မနည်းအချိန်လုနေရတာ ပျိုတို့အားလုံးလိုလိုဖြစ်မှာပါ။ ဒီလိုအချိန်ရှားပါးလွန်းတဲ့ပျိုလေးတွေအနေနဲ့ skin care ကိုနေ့တိုင်း တကူးတက လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဒီ သုံးမိနစ်လောက်အချိန်ပေးရုံနဲ့ အစွမ်းပြမယ့် Etude House ရဲ့ 3-Minutes Care Series လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
.3Minutes Simple Skin Caring for who Hate Hassles by Uncomplicated Steps NEW Simple3Minutes Care Mask . 격하게 아무것도 하고 싶지 않지만 피부는 걱정되는 #프로귀찮러 를 위한 NEW 간편한 3분케어 마스크? . ✔ #3분케어인모닝마스크 슉! 뽑아서? 얼굴에 착!착! 바쁜 아침 이걸로 메이크업 준비 끝! ✔️#3분케어마스크 (2종) 피부를 산뜻하고 촉촉하게 케어? 환하고 맑은 피부로 가꿔주는 [강황] 깊은 보습감으로 피부를 촉촉하게 케어 탄력 있는 탱탱한 피부로 가꿔주는? [검정콩] . ❣3분케어마스크 10매세트 온라인 #얼리버드찬스 50% 혜택 이벤트 진행중(6/27~소진시까지) ❣#얼리버드 특가 3분케어 스페셜 4종 세트 (마스크 2종x5매 + 인모닝마스크 + 인샤워팩) 45,000원->20,000원 . #에뛰드하우스신상 #3분케어 #마스크팩 #인모닝마스크 #인샤워팩 #3분퀵케어 #밀착력 #수분공급 #3MinutesCareMask #SimpleCare #Mask #ShowerPack #Skin #Makeup #kbeauty #etude #etudehouse #에뛰드 #에뛰드하우스 #エチュードハウス
A post shared by 에뛰드하우스 공식 계정입니다. (@etudehouseofficial) on Jul 1, 2018 at 1:48am PDT
ဒီ 3-Minutes care series လေးမှာ ပါဝင်တာကတော့ မတူညီတဲ့ type သုံးမျိုး နဲ့ facial mask လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်လေးအတိုင်း သုံးမိနစ်၊ အချိန်ပိုရလို့ရှိရင်တော့ ၁၀ မိနစ်လောက် အချိန်ပေးရုံနဲ့ မနက်ပိုင်းမိတ်ကပ်မလိမ်းခင်မှာ ကြုံရတတ်တဲ့ မျက်နှာဖောယောင်နေတာ၊ နီမြန်းနေတာတွေကို သက်သာစေပြီး မိတ်ကပ်သားလည်းပိုစွဲတာကြောင့် အရမ်းကိုအသုံးဝင်ပြီး အဆင်ပြေစေတဲ့ skin care series တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ series မှာ ပါဝင်တဲ့ mask ၃မျိုးထဲက ပထမ၁မျိုးကတော့ 3-Minutes Care Pack in Shower ဆိုတဲ့ gel-type wash off mask လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မနက်မျက်နှာသစ်ပြီး ရေမချိုးခင်လေးမှာ ဒီ gel-type mask လေးကိုမျက်နှာပေါ်မှာလိမ်းပေးပြီး ရေချိုးခေါင်းလျှော်လုပ်လို့ ရပါတယ်လို့ဆိုထားတာကြောင့် တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပါပဲ။ ရေချိုးပြီးလို့ ရှိရင်တော့ ဒီ mask လေးကို ရေခပ်နွေးနွေးနဲ့ ဆေးချလိုက်မယ်ဆိုရင် မနက်ထဲကကြည်လင်လန်းဆန်းနေတဲ့ မျက်နှာလေးကိုပိုင်နိုင်ပါပြီနော်။
နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ 3-Minutes Care Mask In The Morning ဖြစ်ပြီး ဒီ mask လေးကတော့ တွေ့မြင်နေကြ facial mask လေးတွေလိုပါပဲ။ ရွှေဖရုံသီးအနှစ်ကလုပ်ထားတဲ့ ဒီ mask လေးကလည်း မနက်ပိုင်း မိတ်ကပ်မလိမ်းခင် ပစ္စည်းတွေထည့်နေတုန်းလေးဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းလေးသုံးနေတုန်းဖြစ်ဖြစ် ၃မိနစ်လောက်ကပ်ထားရုံနဲ့ အစွမ်းပြတဲ့ mask လေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ 3-Minutes Care Mask ဖြစ်ပြီး black bean ver နဲ့ tumeric ver ဆိုပြီးနှစ်မျိုးလာပါတယ်။ ဒီ mask လေးကို soft cellulose fabri လို့ခေါ်တဲ့ မျက်နှာပုံစံအတိုင်း ပုံစံလိုက်ပြောင်းနိုင်တဲ့အသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူ့ကိုလည်း မိနစ်အနည်းငယ်ပေးရုံနဲ့ မျက်နှာကိုဝင်းပစေနိုင်တယ်လို့ဆိုကြတာမို့ အလုပ်ရှုပ်ရတာကိုမကြိုက်တဲ့ ပျိုတွေအတွက်အကြိုက်ဖြစ်စေမှာပါ။
image source : https://www.etudehouse.com
<div class=”adunit” data-adunit=”cosmeticmyanmar.com-336×280-1″ data-dimensions=”336×280,728×90″ data-size-mapping=”728×90-336×280-300×250″></div>
ရေဓါတ်ဖြည့်ပေးပြီး နူးညံ့စိုပြေစေဖို့ တာဝန်ယူမယ့် The Saem ရဲ့ Urban Eco Harakeke Toner
Tags: Etude HouseFacial MasksSkin Care